Oko kufanele ukuba kube nguJustin Bieber - Izinto Zobugcisa
Oko kufanele ukuba kube nguJustin Bieber
I-ballad yokulila ifumana u-Justin edlala i-ex. Le ngoma yaqala yakhutshwa kwi-albhamu yokuqala yomculi we pop Ilizwe lam 2.0 ngemveliso ngamanye amaKhanada, abathunywa.
Inguqulelo ehlaziyiweyo yarekhodwa eyakhe UJustin Bieber: Ungaze uthi Ungaze I-albhamu yesandi kunye nembonakalo yeendwendwe yelizwe laseMelika iRascal Flatts. Malunga nokuwela uhlobo ukusuka kwiPop ukuya kwilizwe, uJustin uxelele iABC, 'Umculo ngumculo, kwaye lulwimi jikelele. Ayisiyongxaki ukuba siphi na isitayile, ukuba nje sinomtsalane kwabanye abantu kwaye siyayithanda, yeyona nto ibaluleke kakhulu.
Kudliwanondlebe nesikhululo sikanomathotholo saseNashville i-WSIX, uRascal Flatts owayeyimvumi ephambili uGary LeVox wathi, '[uJustin] usicelile ukuba senze i-duet naye kwirekhodi yakhe elandelayo. Ngokwenene yingoma elungileyo! Umntwana unesiphiwo ngokwenene. Udlala izixhobo ezintlanu okanye ezintandathu ezahlukeneyo kakuhle. '
Ingoma ibibhalwe ngokudibeneyo ngumculi-umbhali wengoma uLuka Boyd, ezinye iikhredithi zakhe zibandakanya iingoma zikaBritney Spears ('Bulala Izibane') kunye noChris Brown ('Crawl') phakathi kwabanye. Ngo-2011 uBeyoncé wakhetha uBoyd ngendima yakhe ' Qhuba Ihlabathi ividiyo. Ukrekhoda umculo phantsi kwegama likaLuka James.
Andifuni kuphoswa yinto yomculo
oh-oh nanku esiza
kulungile ngoku sana kulungile ngoku
Kuya kufuneka wazi ukuba ubabambe nini
ufana nomoya patrick ojikelezayo
fuck ngathi isilwanyana lyrics